Inkulumo kaNelson Mandela (1994) - AFRIKHEPRI FOUNDATION
By I-AFRIKHEPRI FOUNDATION ngo-Septhemba 12, 2019
Ukuvulwa kukaNelson Mandela
Isikhathi sokupholisa amanxeba sesifikile. Isikhathi sesifikile sokugcwalisa izikhala ezihlukanisa nathi. Isikhathi sokwakha sesifikile. Ekugcineni sesifinyelele esiphelweni sokukhululwa kwethu kwezepolitiki. Sizibophezele ukukhulula abantu bethu ebugqilini ngenxa yobuphofu, ukuswela, ukuhlupheka, ubulili kanye nezinye izindlela zokubandlululwa. Sikwazile ukuthatha izinyathelo zokugcina eziya enkululeko ezimweni zokuthula ezilinganayo. Sizibophezele ekwakheni ukuthula okuphelele, okulungile futhi okuhlala njalo. Siphumelele ukufaka ithemba ezinhliziyweni zezigidi zabantu bethu. Sizibophezele ekwakheni umphakathi lapho bonke abantu baseNingizimu Afrika, noma ngabe bemhlophe noma imnyama, bengama futhi bahambe ngaphandle kokwesaba, beqiniseka ngelungelo labo elingenakuphikiswa lesithunzi somuntu, izwe lomnyama, ngokuthula ngaye kanye nezwe. Njengobufakazi bokuzibophezela kwabo ekuvuseleleni izwe lethu, uHulumeni obambile weNhlangano Yobumbano Kuzwelonke wenza isinqumo, njengendaba ephuthumayo, yokuxolelwa kwezigaba ezahlukahlukene zabantu abasebenza izijele zabo njengamanje. Sinikezela ngalolu suku kuwo wonke amaqhawe namaqhawekazi aleli lizwe nakuwo wonke umhlaba owazidela noma wanikela ngokuphila kwabo ukuze sikhululeke. Amaphupho abo afezekile. Inkululeko umvuzo wabo.
Sizizwa sithobekile futhi siziqhenya ngenhlonipho nangelungelo abantu baseNingizimu Afrika ekusibekeleni uMongameli wokuqala kahulumeni wentando yeningi, ongakhethiyo ngokobandlululo futhi ongakhethi ngokobulili.
Siyazi ukuthi indlela eya enkululekweni ayilula. Siyazi ukuthi akekho kithi ongaphumelela yedwa.
Ngakho-ke, kufanele sisebenze ndawonye, ​​njengabantu ababumbene, ngokubuyisana kwesizwe, ekwakheni isizwe, ekuzalweni kwezwe elisha.
Kwangathi ubulungiswa bungalingani bonke.
Kukhona ukuthula kubo bonke.
Ukuthi kukhona umsebenzi, isinkwa, amanzi kanye nosawoti kubo bonke.
Kwangathi ngamunye wethu angazi ukuthi umzimba wakhe, ingqondo nomphefumulo wakhe bakhululwe ukuze bahlume.
Ngeke kuphinda futhi, leli zwe elihle kakhulu livuselele isipiliyoni somcindezeli komunye nomunye, futhi aphinde aphinde ahlupheke ukuthukuthela ngokuba yinkathazo yezwe.
Vumela inkululeko ibuse.
Kwangathi ilanga lingaze lishone ekuzuzeni okuhle kangaka komuntu.
UNkulunkulu abusise i-Afrika.
Usuke usabela "Inkulumo kaNelson Mandela yokuvula ..." Imizuzwana embalwa edlule